> Resource > Top List > 10 Isticmaalada Great ee telefoonada Old iyo murriyado
Hel casriga ah oo dheeraad ah oo iska ilaawaan kuwii hore galay dhaansha? Ma aqaano inta qalabka jir, dhacsan aad armaajada iska gelinay. Maalin, marka waan ka furay dhaansha qol fadhi aan, waxaa jira 3 telefoonada jir ah oo kiniin ah oo gaboobay. Dhab ahaantii, waxaan kaliya oo aan iyaga yareyso karo oo la joojiyo iyaga in qashin qubka, maxaa yeelay, way i qaar ka mid ah xusuus wanaagsan keenay. Oo waxaan helay inaan iyaga siin karaan nolol cusub. Waxaa jira in ka badan 10 siyaabo fiican waad isticmaali kartaa iyaga ka mid ah. Hoos waxaa ku qoran 10 isticmaalka weyn ee telefoonada jir ah iyo kiniiniyada Waxaan jeclahay in aan idinla wadaago.
* Iibiya Phone Old ama Tablet
Xitaa telefoonka duq ah oo dhacsan, dadka qaarkood ayaa weli waxa ay u baahan tahay in ay wacaan oo soo diro fariimaha qoraalka ah. Waxaad ka iibsan kartaa qiimo wanaagsan dukaanka online qaar ka mid ah, sida BestBuy, cawl, uSell, Wal-Mart, Amazon, iwm By in ay iibiyaan, si aad u hesho lacag iyo dadka aan haysan miisaaniyadda badan ka heli kartaa qalab waxtar leh . Waa wax fiican adiga iyo dadka aad u hesho qalabka.
* Leexo Phone Old ama Tablet galay Camera Security ah
Haddii aad u baahan tahay inaad isha ku hay gurigaaga ama caruurta, waa in aad noqon telefoonka jir ama kiniin galay camera ammaanka ah, haddii ay tahay inay awoodaan inay qaataan videos. Waxaa Connect lahaa shabag iyo soo bixi app oo lacag la'aan ah in uu awoodo in uu ordo camera ammaanka qalabka jir. Afte markaas, waxaad arki kartaa in camera ammaanka si fiican u shaqeeyaa. Halkan waa hage loogu talagalay sidii ay u noqon iPrhone ah oo gaboobay galay camera ammaanka ah waxaa laga yaabaa in uu xiiso u >>
* Isticmaal Phone ee Old ama Tablet si Ma tijaabi
Marka aad isticmaalayso telefoonka ama kiniin ah, waan hubaa dhif aad u tijaabiyaan la, baqaya inay waayaan xogta ama ka shaqeeya waxay ka tago. Si kastaba ha ahaatee, marka aad hesho qalab dheeraad ah, waxa aanu mar dambe laha. Waxaad samayn kartaa tijaabo way la, soo celinta nidaamka qalliinka, xidid waa, JAILBREAK ama iftiimiyo Fadhi cusub , waxaa ka. Just samayno wax kasta oo aad rabto in aad la. Tijaabo waa madadaalo iyo ku caawinaya si aad u hagaajisid xirfadaha ee la isticmaalayo casriga ah.
* Isticmaal Phone ee Old ama Tablet sida Control ah Remote
Hadda waxaad u tagi kartaa telefoonka jir ama kiniin sida rimuut koontaroolka kaas oo inay qabsadaan tiro ka mid ah qalabka. Si aad uga dhigto shaqeeyo, waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan telefoonka ama kiniin si toos ah TV ama nidaamka audio, ama ka iibsan qalab dheeraad ah si xubnuhu telefoonka ama kiniin la qalab kale, sida ulaha geeyo Chromecast.
* Samee Phone ee Old ama Tablet Kid-friendly
Waxaad tahay daal qalabka hore, laakiin caruurta aad u jeclaan laga yaabaa. Waxaad samayn kartaa qalabka jir saaxiibka nala ah inay caruurta aad by u samaynta galay xiiso leh iyo qalab waxbarasho oo loogu talagalay caruurta aad. On qalabka jir, waxaad ku rakibi karaa barnaamijyadooda funning qaar ka mid ah ciyaaraha, halxiraale, iyo waxbarasho. Ka hor inta aan la siinin aad caruur, fadlan ka taxadir in aad xisaabta. Ayaa la rejeynayaa in aad gasho ka mid ah xisaabtaada ama qarka u saaran profile mamnuuceen aad kid si ay u helaan in ay barnaamijyadooda qaar ka mid ah ama xisaab.
* Leexo Phone ee Old ama Tablet galay a qaadan karo Hard Drive
Haddii aad ka shaqayso xafiiska, markaas waa inaad haysataa badan files digital muhiim ah si ay u fuliyaan idinla joogay oo dhan. Waxaa hubaal ah, hadda adeegyo badan oo daruur u oggolaadaan in aad badbaadin dukumentiyada daruurta iyo iyaga download si ay u isticmaalaan meel kasta oo aad tahay iyo mar kasta oo aad u baahan tahay marka aad ka heli kartaa shabakad. Si kastaba ha ahaatee, dad badan ayaa weli ka welwelina ammaanka dukumentiyada. Haddii ay sidaas tahay, waxaad u tagi kartaa hore qalab Android ama Apple sida baabuur qaadi karo adag in uu kaydiyo waraaqaha muhiimka ah.
* Samee Phone ee Old ama Tablet MP3 u gaar ah ama Video Player
Waa in aan ogaado in gororinaysa batteriga si dhakhso ah marka ciyaaro heeso iyo videos on telefoonka oo kiniin ah. Waxaan naftayda ku yaraato u isticmaali telefoonka Waxaan la isticmaalayo wicitaanada oo farriin qoraal ah u ciyaaro videos, sababta oo ah haddii sidaas darteed waxaan u leeyihiin in ay si joogto ah ka qaadaan. Haddii aad leedahay telefoonka ah oo gaboobay ama kiniin ah, aad dajiyaan karaa heesaha iyo videos badan inay ka sameeyaan sidii music u gaar ah ama ciyaaryahan video. Marna sababa taleefan aad failure.
* Leexo Phone ee Old ama Tablet galay heegan ah e-Reader
Haddii aad jeceshay wax akhriska, markaas waa in aad u gaar ah e-akhristaha dhow dahay. In kastoo telefoonka ama kiniin aad isticmaalayso loo isticmaali karaa e-akhristaha, ma u fiican yahay sida isagoo mid u gaar ah. Waxaad ku rakiban kartaa nooc kala duwan ee Chine reading ku quduuska e-akhristaha iyo dajiyaan eBooks badan u galay akhriska ama haynta.
* Samee Phone ee Old ama Tablet sida hawshu Digital Photo
Waxaad la xiriiri kartaa telefoonka jir ama kiniin galay jir ah u sixraya firfircoon digital photo. Waa qabow in ay sawiro aad u qaali ah soo bandhigay shaashadda, gaar ahaan ka dib markii aad samaynta slideshow firfircoon leh ururinta sawirada. Iyo inay si fiican u shaqeeyaan, waa in aad gab gaabiyo shaashadda ama muuqaalada qufulka ..
* Leexo Phone ee Old ama Tablet sida Saacad Alarm ama Barometer
Haddii aad u baahan tahay saacad digtoonaanta afuuftaan, waxaad isticmaali kartaa telefoonka jir ama kiniin ahaan had iyo jeer on-aad saacad walba in toos. Waxa aan ku jeclahay fiican waa in aad u isticmaali arka halbeegga. Waxaad kala soo bixi kartaa app ah ee telefoonka ama kiniin ah si uu u eego warbixin ka saldhigga cimilada deegaanka oo soo saadaasha hawada. Waa wax aad loo baahan yahay in la ogaado cimilada ka hor inta aadan ka bixin.
Top Toban Players DVD Best for Windows 8
Top 30 ciyaaryahan 3GP for Windows / Mac / macruufka / Android
Top 30 ciyaaryahan avi for Windows / Mac / macruufka / Android
Top 15 video in converters video for Windows iyo Mac
Top 15 HD video Converter for Windows iyo Mac
Top 11 Arrimaha FaceTime oo iyaga dhib
100 xiisaha badnaa Status Updates